जीवन विकासको आईपीओ पाउने एक महिनामै मालामाल, अझै कति बढ्ला सेयरमूल्य ? - Arthasansar
जीवन विकासको आईपीओ पाउने एक महिनामै मालामाल, अझै कति बढ्ला सेयरमूल्य ?
विहीबार, २८ साउन २०७८, १२ : ३९ मा प्रकाशित
जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओ हात पार्ने लगानीकर्ताहरु एक महिनामै मालामाल भएका छन् । एक महिना अघि कम्पनीको आईपीओमा १ हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको सेयर पुँजी अहिले बढेर करिब २५ हजार पुगेको छ । असार २३ गते कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँड सम्पन्न भएको हो ।
साउन १४ गतेदेखि दोस्रो बजारमा कारोबार प्रारम्भ भएको कम्पनीको आजसहित ११ दिन दोस्रो बजारमा कारोबार भएको छ । कुल ११ दिन दोस्रोबजार कारोबार भएकोमा ७ दिन कम्पनीको सेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो ।
कारोबारको पहिलो दिनमा ९१४ रुपैयाँमा कारोबार प्रारम्भ भएको कम्पनीको सेयरमूल्य आजसम्म आईपुग्दा २ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ । एक महिनाअघि यो कम्पनीको १००० रुपैयाँमा १० कित्ता आईपीओ पाउने लगानीकर्ताहरुले अहिले २३ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी कमाइसकेका छन् । अझै बजारमा कम्पनीको सेयरको माग हेर्दा कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
केहि महिना अघि आईपीओ जारी गरेको महिला लघुवित्त संस्थाको सेयर मूल्य करिब ६ हजारको आसपासमा पुगेको हुनाले पनि लगानीकर्ताहरु यो कम्पनीको सेयर मूल्य त्यसैको हारहारीमा पुग्न सक्ने अनुमानले यो कम्पनीको सेयर बेच्न तयार देखिँदैनन् ।
हालै कम्पनीले जारी गरेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तिय विवरण अनुसार कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ११३ रूपैयाँ ३४ पैसा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा संस्थाले ६८ करोड ९५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । उक्त नाफा रकम गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०१.९७ प्रतिशतले धेरै हो । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा संस्थाले ३४ करोड १४ लाख २३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।
चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा संस्थाले एक अर्ब ४१ करोड ६७ लाख ११ हजार रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी गरेको छ । उक्त आम्दानी गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ४९.२९ प्रतिशतले धेरै हो । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा संस्थाले ९४ करोड ८९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी गरेको थियो । संस्थाको प्रतिसेयर नेटवर्थ ३१५ रूपैयाँ २२ पैसा रहेको छ । संस्थाको चुक्ता पूँजी ६० करोड ८४ लाख रूपैयाँ छ । संस्थाको जगेडा कोषमा एक अर्ब ३० करोड ९४ लाख रुपैयाँ छ ।
कम्पनीको वित्तिय विवरण हेर्दा कम्पनी आधारभुत रुपमा एकदमै बलियो देखिन्छ । कम्पनीको जगेडा कोषमा कम्पनीको चुक्ता पुँजीभन्दा दुई गुणाभन्दा बढि रकम सञ्चित छ। कम्पनीका सबै सूचकहरु एकदमै बलिया देखिन्छन् जसका कारण पनि लगानीकर्ताहरुमा कम्पनीले उच्चदरमा लाभांश वितरण गर्ने अपेक्षा देखिन्छ ।
संस्थाले गत महिना असार ११ गतेदखि १५ गतेसम्म प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरका कूल १९ करोड ७७ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको १९ लाख ७७ हजार ३ सय कित्ता आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको थियो । जसमध्ये कुल पुँजीको ०.५ प्रतिशतले हुन आउने ३० हजार ४२० कित्ता संस्थाका कर्मचारीहरुलाई र सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न लागेको पुँजीको ५ प्रतिशतले हुन आउने ९८ हजार ८६५ कित्ता सामुहिक लगानी कोषका लागि छ्ट्याइएको छ भने बाँकी १८ लाख ४८ हजार १५ कित्ता सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको थियो ।
जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओमा आवेदनहरुमध्येबाट ६९ हजार ९ जना आवेदकको आवेदन रद्द भएको थियो । कुल १४ लाख ७० हजार ७ सय ४० कित्ता आईपीओ रद्द भएको हो ।
कम्पनीको आईपीओमा परेको आवेदनमध्ये २० लाख १८ हजार ३ सय ८ जना मात्र योग्य आवेदक रहेका थिए । गोलाप्रथाबाट गरिएको बाँडफाँडमा बढीमा ११ कित्ता र थोरैमा १० कित्ता बाँडफाँड गरिएको थियो । आईपीओ वितरण गर्दा १ लाख ८४ हजार ८ सय १ जना आवेदकले १० कित्ताका दरले सेयर र १० कित्ता भन्दा धेरै आवेदन दिने ५ जनाले भने ११ कित्ताका दरले सेयर पाएका हुन् ।
हरेक दिनको सेयर कारोबारमा यो कम्पनीको माग उच्च हुने गरेपनि सप्लाई भने सून्य जस्तै देखिन्छ । हिजो बुधबारसम्ममा नेप्सेमा संस्थाको जम्मा २ हजार १५ कित्ताको सेयर कारोबार भएको हो । दोस्रोबजारमा हरेक दिन कम्पनीको लाखौ कित्ता सेयरको माग आउने गर्दछ ।
समग्रमा कम्पनीको वित्तिय अवस्था, लगानीकर्ताहरुको बलियो मनोविज्ञान र बजारमा कम्पनीको सेयरको माग र आपुर्तीको रेसियोलाई आधार मानेर हेर्दा अझै केहि समय कम्पनीको सेयर मूल्य निरन्तर बढ्ने देखिन्छ । लगानीकर्ताहरुको मनोविज्ञानका आधारमा कम्पनीको सेयर मूल्य महिला लघुवित्तकै हारहारीमा पुग्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।